Uyazi ukuthi yimaphi amathengisi athengisa ama-Amazon angcono kakhulu phakathi kwe-ecommerce gurus?
Ngisho noma ngabe ungumdlali omusha kule platform ye-ecommerce enkulu kunazo zonke emhlabeni, kungenzeka ukuthi into yokuqala ku-Amazon ukuthi wonke umuntu odayisa ngaphandle ukhokhiswa ngemali - empeleni ukhokhela njengomthengisi ochwepheshe. Ngisho ukuthi kunezinhlelo zenyanga, imali yokudlulisela phambili, izinkokhelo zokugcwalisa i-FBA, izimali zokusungula futhi mhlawumbe ezinye izinkokhelo ezikhokhisiwe esingazizwa nazo. Kodwa kuthiwani uma ngikutshela ukuthi kukhona amanye amathuluzi athengisa kakhulu ama-Amazon athengisa ekufinyeleleni okuvulekile mahhala? Kuthiwani uma bekwazi ukuguqula ukudayiswa kwakho kwansuku zonke ohambweni olulawulwa ngokugcwele?
Ngezansi ngizokubonisa ambalwa amathuluzi okudayisa ama-Amazon angenzi nje kuphela ukwenza izinto zibe lula, kodwa ziwusizo kakhulu ekuthuthukiseni ibhizinisi lakho lokuthumela phansi ekusebenzeni okungcono nakancane. Njengomdayisi wesithathu, ngazama amathuluzi amaningi e-intanethi ahlukene - futhi-ke, kwakukhona izinketho ezingenamsebenzi. Konke mayelana nokusabalalisa kwesofthiwe yamahhala, kwesokudla? Kodwa mina, amathuluzi amathathu okuthengisa ama-Amazon alandelayo kufanele asebenzise noma okungenani abe nesilingo esisodwa.
Amazon Incitability Calculator
Bonke abathengisi be-FBA / FBM kufanele bazi ukuthi bangalindela kanjani izinzuzo zabo zenzuzo, isibonelo uma kuziwa ekubandakanya into entsha ukudayiswa noma ngisho nomugqa womkhiqizo wonke - arizona home appraisal service. Ngokumangalisa, kodwa ukukhetha i-calculator efanele akulula njengoba iningi lethu lingacabanga. Kuyinto engavamile kakhulu, kufanele ngivume. Noma kunjalo, uma ufuna ukusindisa isikhathi sakho futhi ube nephuzu elihle lokuqala lokuhlelwa kwekusasa lakho - ithuluzi le-Profitability Calculator kufanele libe ne-esitolo sakho sokuthumela phansi.
Ukugcwaliseka Kwama-Multi-Channel (MCF)
Lolu hlelo luyaziwa kakhulu ngaphakathi kwe-Amazon FBA. Yini okungaphezulu - lokhu cishe yisikhathi kuphela i-Amazon evumela idatha yokuxhumana yebhizinisi lenkampani ngaphandle kweplatifomu. Ukusebenzisa uhlaka lwe-Multi-Channel Ukugcwaliswa koMzila kungakunika ngokushesha umnyango wokugcwalisa. Konke kusebenza kalula - ngegama layo emhlabeni wonke ekulawulweni kwezinto zokugcina nokugcwaliseka kwe-oda, ama-Amazon angakhetha, apake futhi athumele noma yimaphi ama-oda - ngqo kumakhasimende akho, futhi egameni lakho. Lesi sici sibonisa izinhlangothi zayo ezinamandla kakhulu, ikakhulukazi uma kuziwa esimweni esifushane esisheshayo noma ngokwemibandela yokudiliva yomuntu siqu.
Phakathi kwamanye amathuluzi athengisa ama-Amazon, lokhu kungenzeka ukuthi yisisombululo esiphezulu sabathengisi abaqeqeshiwe abavame ukuzitholela kude nama-computer . Kodwa akukho sidingo sokukhathazeka - manje i-smartphone yakho (noma i-Android noma i-IOS - ithuluzi ifana kokubili) ingasetshenziswa ukulungisa ngokushesha noma yikuphi ukucindezela usuku nosuku. Ngamanje, ngithole ukuthi lolu hlelo lokusebenza luwusizo kakhulu ukuvula ihendisethi yami ibe yindawo yokulawula yangempela ukunikeza ukuphendula okusheshayo noma ukuthunyelwa kulokhu okulandelayo: ukubuka ukusebenza kwakho kwamanje kwebhizinisi, ukuthengisa ngesilinganiso isikhathi esithile, ukuphathwa kwempahla, ukuphatha ama-oda, buka imininingwane elandelayo yokukhokha, thola amathuba amasha wemikhiqizo yokuhweba nokulindela okulinganiselwe kwamanani, ukudala uhlu, ukunikeza impendulo yamakhasimende okusheshayo - nokuningi okuningi.